site na nchịkwa na 05-06-21
Mmepe nke ụlọ ọrụ plastik plastik nke dị na China amalitela iji nke nta nke nta tozuo oke, ụzọ ụlọ ọrụ omenala nke ụfọdụ obere ụlọ ọrụ na-eme ala nwere ike na-agakwa n'ike n'ike. Nrụpụta njikwa ika, ịre ahịa ahịa ...
Ka ọ dị ugbu a, site na ịkwalite ihe ndị dị n'ala, ndị mmadụ ejedebeghị na taịlị ụlọ. Na mgbakwunye na ala, ala PVC ji nwayọọ nwayọọ na -egbo mkpa ndị na -azụ ahịa maka ahụike ikuku. Nkwalite zuru oke nke PV ...
site na nchịkwa na 04-06-21
Ala plastik dị ugbu a bụ ihe eji emebe ihe ọkụkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ dị elu n'ihe ihe owuwu ụwa. Kemgbe ewebatala plastik n'ala anyị, ọ bụ afọ ise ma ọ bụ isii nke mmepe. A na -atụ anya na ndị ọzọ ...